Fieldboom: Fordị Smart, Nyocha, na Quizzes | Martech Zone
Ahịa maka ụdị ngwa eji arụsi ọrụ ike. Enweela ụlọ ọrụ dị iche iche na-ejigide mmepe ụdị ihe karịrị afọ iri na weebụ, mana teknụzụ ọhụụ na-enwekarị ahụmịhe ndị ọrụ, onyinye mgbagha dị mgbagwoju anya, na ọtụtụ njikọta. Ọ dị mma ịhụ ka ubi a na-aga n'ihu nke ukwuu.
Onye ndezi Fieldboom
Otu onye ndu nọ Ubi, nke atụmatụ ya gụnyere:
Azịza ọkpọkọ - Gụnye azịza nke ajụjụ gara aga dịka akụkụ nke ajụjụ ọhụrụ ma ọ bụ na Daalụ ihuenyo.
Azịza nyocha - Akara ndi mmadu n’adabere na azịza ma gosipụta ihu ọha I meela peeji ma ọ bụ bizigharị URL dabere na akara ha.
Nweta API - Nweta Fieldboom zuru ezu onye nrụpụta API iji kwalite ma zaghachi nzaghachi, mepụta akụkọ ọdịnala na ndị ọzọ.
nkwenye - Akpaghị aka zipu nkwenye, daalụ ma ọ bụ usoro ị ga - esote onye ọ bụla mezue ụdị ma ọ bụ nyocha gị.
Editor - Mee ụdị na nyocha site na iji nchịkọta isi na-pịa nchịkọta akụkọ n'ime nkeji ole na ole. Ọ dịghị imewe ma ọ bụ tech nkà chọrọ.
Nbudata faịlụ - - Mee ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe itinye faịlụ site na fọm gị, tinyere PDFs na ụdị faịlụ ndị ka ukwuu.
Mmekọrịta - Mekọrịta mmekọrịta na akpaghị aka na CRM gị, sọftụwia email ma ọ bụ 750+ ngwa ndị ọzọ na ntanetị ole na ole.
Epeepe - Mepụta na tinye aha mmado na nzaghachi. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịdepụta ndu n'ime ọkụ, ọkụ na oyi maka usoro dị mfe.
Ịma Ọkwa - Nweta ozi banyere azịza ọhụrụ site na ọtụtụ ọwa gụnyere email, Slack na desktọọpụ desktọọpụ.
Nhọrọ - Weghara oge akara aka na oge, Net Promoter Score, na nhọrọ ndị ọzọ emepụtara.
ịkwụ ụgwọ - Mepụta usoro ịkwụ ụgwọ omenala dabere na azịza isi ma were Stripe ma ọ bụ Paypal were ịkwụ ụgwọ.
Personalization - Mee ka ọnụego ndị gwụchara site na ozi nnabata omenala ma kelee mmadụ ndị nwere ozi omenaala mgbe ha mechara.
Nyegharịa - Zipu ndi mmadu na webusaiti gi, blog gi ma obu ulo ahia intaneti ozugbo ha mechara udi ma obu nyocha.
akuko - Hụ usoro na nghọta gafere nzaghachi niile site na iji dashboard na eserese dị ike nke na-enye akụkọ.
anabata - Niile nyocha na ajụjụ anya na-eche oké na a mobile ngwaọrụ ma ọ bụ mbadamba.
Mafere Logic - Jiri usoro mgbagha gbanwere ihe ndị mmadụ na-ahụ na-esote, dabere na azịza ha nye ajụjụ dị ugbu a.
Fieldboom dị mfe maka onye ọ bụla iji, ma dị ike zuru oke iji mepụta igwe eji arụ ọrụ nke ga - enyere aka ịzụlite azụmaahịa gị ngwa ngwa.
Nhọrọ Mobile Fieldboom
Nọmba Ekwenti Fieldboom
Fieldboom Mobile Bulite
Mkpịsị aka Fieldboom Mobile
Fieldboom Mobile Idenye aha
Gbalịa Fieldboom n'efu!
Tags: azịza pipingzaa isiubiboomụdị apietolite njikọtaụdị ịkwụ ụgwọụdị redirectakwụkwọ akụkọformsnet nkwalite akaraịkwụ ụgwọPaypalnyochaịdenye nzaghachiụdị na-emeghachi omumemafere mgbaghaSmartdị Smartstraipunyocha